Daawo Hogaanka Socdaalka oo soo bandhigay gabdho lagu qalday dal ku gal been abuur ah |
Daawo Hogaanka Socdaalka oo soo bandhigay gabdho lagu qalday dal ku gal been abuur ah
Hoggaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay gabdho watay baasa boorka Soomaaliga oo lagu dhejiyay dal ku gal (Visa) been abuur ah oo laga soo celiyay dalka Kenya.
Jeneraal Cabdullaahi Gaafoow Maxamuud oo Warbaahinta kula hadlayay garoonka diyaaradaha ayaa soo bandhigay laba gabdhood oo muwaadin ah kuwaasi watay baasa booro ay ku dhaganaayeen fiisooyin been abuur ah, kuna siijeedey dalka Uganda, balse laga qabtay dalka Kenya sidaasna dalka loogu soo celiyay, isagoo ka digay in dadka lagu qaldo fiisooyin been abuur ah.
Jeneraal Gaafo ayaa sheegay in fiisooyin sax ah laga heli karo Muqdisho oo dowladda Uganda ay ku leedahay safaarad, waxaana uu intaa ku daray inay jiraan dad ku qaraabta fiisooyinka been abuurka ah ee doonaya in ay bulshada ku qaldan, isagoo xusay inay talaabo cad ka qaadi doonin ciddii ay ku arkaan iyada oo howlo nuucaasi oo kale ah ku guda jirta.
Intaasi kadib ayaa gabdhihii watay baasa boorada been abuurka ee lagu qalday, isla markaana laga qaatay lacago badan ayaa waxa ay Warbaahinta qaranka u sheegeen in hal habeen ay ku baryeen xabsi, isla markaana lagu qabtay magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi bari ee Kenya.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray dad badan oo watay dokumintiyo been abuur ah oo si qaldan loo adeegsanya kuwaasi oo soo bandhigay Hogaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dowladda.